၁၄ နှစ်အရွယ် ညဏ်ရည်မသန်စွမ်း မိန်းကလေး ဦးလေး(၂)ယောက်ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ရှိနေ - Real Gaming Myanmar
၁၄ နှစ်အရွယ် ညဏ်ရည်မသန်စွမ်း မိန်းကလေး ဦးလေး(၂)ယောက်ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ရှိနေ
၁၄ နှစ်အရွယ် ညဏ်ရည်မသန်စွမ်း သည့် မိန်းခလေးအား ဦးလေး(၂)ဝမ်းကွဲတော်စပ်သူ (၂)ဦးမှ သား မယားအဖြစ်ပြုကျင့်၍ကိုယ်ဝန် (၄) လ ရှိမှသိရသည် …..
ဖြစ်စဉ်မှာ တရားလို ဒေါ်———သည် ညဏ်ရည်မသန်စွမ်းသည့် သမီးဖြစ်သူ မ——–(၁၄)နှစ် နှင့်အတူ ပခုက္ကူမြို့နယ် — ———ကျေးရွာတွင်နေထိုင်ပြီး၁၇.၁၁.၂၀၁၈ ရက်နေ့၌ သမီးဖြစ်သူ မ——-(၁၄)နှစ်မှာဓမ္မတာမလာသည်မှာ(၄)လခန့်ရှိသည်ကို သိရှိရသဖြင့်ကျန်းမာရေးမကောင်းသည်ထင်ပြီး ရွာရှိ သားဖွားဆရာမထံ သွားရောက်ပြသစမ်းသပ်ရာ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရ၍ ၎င်းနေ့ ၁၆:၅၀ အချိန်ခန့်တွင် မခုက္ကူမြို့ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်ရှိ ဆေးခန်းတွင် ထပ်မံပြသရာကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောပြသိရှိရသဖြင့် သမီးဖြစ်သူ မ——– (၁၄)နှစ်အား မေးမြန်းရာ လွန်ခဲ့သော ၅လခန့် နေ့ရက်မမှတ်မိ နေ့လည်အချိန်ခန့်က တရားလိုဒေါ်——–နှင့် မောင်နှမနှစ်ဝမ်းကွဲတော်စပ်ပြီး သမီးဖြစ်သူ၏ ဦးလေးနှစ်ဝမ်းကွဲတော်စပ်သူ တစ်ရွာတည်းနေ ပိုင်စိုးသက်မှ သရဲကြောက်၍လိုက်ခဲ့ရန်ခေါ်သဖြင့် လိုက်သွားခဲ့ရာ ရွာ၏အနောက်မြောက်ဘက်ရေကန်ဘောင်ဘေးအရောက်တွင်အသင့်စောင့်နေသော ပိုင်စိုးသက်၏ အစ်ကိုအရင်းဖြစ်သူ အောင်မျိုးမင်းမှ ဦးစွာ သားမယားအဖြစ်(၁)ကြိမ် ပြုကျင့်ခဲ့ပြီး ပိုင်စိုးသက်မှလည်း သားမယားအဖြစ်(၁)ကြိမ်ပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းနောက်နေ့ရက်မမှတ်မိ နေ့လည်ပိုင်းက အောင်မျိုးမင်းမှ ကြာပန်းခူးပေးမည်ဟုပြောဆိုပြီး ရွာ၏မြောက်ဘက် ဦး——-၏ယာခင်းအတွင်းတွင်လည်း သားမယားအဖြစ်(၁)ကြိမ်ပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းနောက် နေအိမ်မြောက်ဘက် ကျေးရွာပိုင် ရေစက်ပျက်ထားသည့် တိုက်ပျက်အတွင်း၌လည်း အောင်မျိုးမင်းမှ သားမယားအဖြစ်(၁)ကြိမ်ပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်း သမီးဖြစ်သူ မ——–(၁၄)နှစ်၏ပြောပြချက်အရ သိရှိရသဖြင့် သမီးဖြစ်သူ မ———-(၁၄)နှစ်အားသားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်သူ အောင်မျိုးမင်းနှင့် ပိုင်စိုးသက်တို့(၂)ဦးအား အရေးယူပေးရန် ဆွေမျိုးများနှင့် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်နေရ၍ ၂၈.၁၁.၂၀၁၈ ရက်နေ့ မှလာရောက် အမှုဖွင့်တိုင်တန်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည် … ။
တရားလို ဒေါ်——-မှ တိုင်တန်သဖြင့် အောင်မျိုးမင်း(၁၇)နှစ်-ကျဘမ်း မီးသွေးကန်ကျေးရွာကျွဲတဲအုပ်စု-ပခုက္ကူမြို့နယ်နေသူနှင့် ပိုင်စိုးသက်(၁၄)နှစ် ကျဘမ်း လိပ်စာတူနေသူ(၂)ဦးအား ပခုက္ကူမြို့မရဲစခန်းမှ ပ/၅၆၈၁/၂၀၁၈ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၇၆/၁၁၄ ဖြင့်ဖမ်းဆီးရမိပြီး အရေးယူဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်သိရှိရသည် …. ။
Tin Naing Tun >>> ပီတာသင်္ဃန်းကျွန်း
၁၄ နှဈအရှယျ ညဏျရညျမသနျစှမျး သညျ့ မိနျးခလေးအား ဦးလေး(၂)ဝမျးကှဲတျောစပျသူ (၂)ဦးမှ သား မယားအဖွဈပွုကငျြ့၍ကိုယျဝနျ (၄) လ ရှိမှသိရသညျ …..
ဖွဈစဉျမှာ တရားလို ဒျေါ———သညျ ညဏျရညျမသနျစှမျးသညျ့ သမီးဖွဈသူ မ——–(၁၄)နှဈ နှငျ့အတူ ပခုက်ကူမွို့နယျ — ———ကြေးရှာတှငျနထေိုငျပွီး၁၇.၁၁.၂၀၁၈ ရကျနေ့၌ သမီးဖွဈသူ မ——-(၁၄)နှဈမှာဓမ်မတာမလာသညျမှာ(၄)လခနျ့ရှိသညျကို သိရှိရသဖွငျ့ကနျြးမာရေးမကောငျးသညျထငျပွီး ရှာရှိ သားဖှားဆရာမထံ သှားရောကျပွသစမျးသပျရာ ကိုယျဝနျရှိနပွေီဖွဈကွောငျးသိရှိရ၍ ၎င်းငျးနေ့ ၁၆:၅၀ အခြိနျခနျ့တှငျ မခုက်ကူမွို့ အမှတျ(၄)ရပျကှကျရှိ ဆေးခနျးတှငျ ထပျမံပွသရာကိုယျဝနျရှိနပွေီဖွဈကွောငျး ပွောပွသိရှိရသဖွငျ့ သမီးဖွဈသူ မ——– (၁၄)နှဈအား မေးမွနျးရာ လှနျခဲ့သော ၅လခနျ့ နရေ့ကျမမှတျမိ နလေ့ညျအခြိနျခနျ့က တရားလိုဒျေါ——–နှငျ့ မောငျနှမနှဈဝမျးကှဲတျောစပျပွီး သမီးဖွဈသူ၏ ဦးလေးနှဈဝမျးကှဲတျောစပျသူ တဈရှာတညျးနေ ပိုငျစိုးသကျမှ သရဲကွောကျ၍လိုကျခဲ့ရနျချေါသဖွငျ့ လိုကျသှားခဲ့ရာ ရှာ၏အနောကျမွောကျဘကျရကေနျဘောငျဘေးအရောကျတှငျအသငျ့စောငျ့နသေော ပိုငျစိုးသကျ၏ အဈကိုအရငျးဖွဈသူ အောငျမြိုးမငျးမှ ဦးစှာ သားမယားအဖွဈ(၁)ကွိမျ ပွုကငျြ့ခဲ့ပွီး ပိုငျစိုးသကျမှလညျး သားမယားအဖွဈ(၁)ကွိမျပွုကငျြ့ခဲ့ကွောငျး ၎င်းငျးနောကျနရေ့ကျမမှတျမိ နလေ့ညျပိုငျးက အောငျမြိုးမငျးမှ ကွာပနျးခူးပေးမညျဟုပွောဆိုပွီး ရှာ၏မွောကျဘကျ ဦး——-၏ယာခငျးအတှငျးတှငျလညျး သားမယားအဖွဈ(၁)ကွိမျပွုကငျြ့ခဲ့ကွောငျး ၎င်းငျးနောကျ နအေိမျမွောကျဘကျ ကြေးရှာပိုငျ ရစေကျပကျြထားသညျ့ တိုကျပကျြအတှငျး၌လညျး အောငျမြိုးမငျးမှ သားမယားအဖွဈ(၁)ကွိမျပွုကငျြ့ခဲ့ကွောငျး သမီးဖွဈသူ မ——–(၁၄)နှဈ၏ပွောပွခကျြအရ သိရှိရသဖွငျ့ သမီးဖွဈသူ မ———-(၁၄)နှဈအားသားမယားအဖွဈပွုကငျြ့သူ အောငျမြိုးမငျးနှငျ့ ပိုငျစိုးသကျတို့(၂)ဦးအား အရေးယူပေးရနျ ဆှမြေိုးမြားနှငျ့ ညှိနှိုငျးတိုငျပငျနရေ၍ ၂၈.၁၁.၂၀၁၈ ရကျနေ့ မှလာရောကျ အမှုဖှငျ့တိုငျတနျခဲ့ကွောငျး သိရှိရသညျ … ။
တရားလို ဒျေါ——-မှ တိုငျတနျသဖွငျ့ အောငျမြိုးမငျး(၁၇)နှဈ-ကဘြမျး မီးသှေးကနျကြေးရှာကြှဲတဲအုပျစု-ပခုက်ကူမွို့နယျနသေူနှငျ့ ပိုငျစိုးသကျ(၁၄)နှဈ ကဘြမျး လိပျစာတူနသေူ(၂)ဦးအား ပခုက်ကူမွို့မရဲစခနျးမှ ပ/၅၆၈၁/၂၀၁၈ ရာဇသတျကွီးပုဒျမ ၃၇၆/၁၁၄ ဖွငျ့ဖမျးဆီးရမိပွီး အရေးယူဆောငျရှကျလြှကျရှိကွောငျသိရှိရသညျ …. ။
Tin Naing Tun >>> ပီတာသင်ျဃနျးကြှနျး
Previous: ပင်ပန်းလွန်းပြီး အိပ်​​ပျော်​​နေ​ပေမယ့်​ ​ရောင်းမယ့်​ပန်းကုံး​လေး​တွေကိုတော့ အောက်မကျစေချင်ဘူး
Next: ရည်းစားအဖြစ် လုံးဝမတွဲသင့်တဲ့ ယောက်ျားညံ့ (၁၀) မျိုး